Nke atọ Apple ụlọ ahịa na Mexico na-erughị afọ abụọ | Esi m mac
Nke atọ Apple ụlọ ahịa na Mexico na-erughị afọ abụọ
Oghere nke ụlọ ahịa Apple bụ n'oge uto kachasị. 2106 abụrụla otu n'ime afọ nwere nnukwu oghere nke Storelọ Ahịa Apple. Mana afọ 2017 anaghị ala azụ, atụmatụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya bụ imepe ụlọ ahịa na ahịa na obere nnọchite anya na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ahịa Apple. N'ihi ya, na ọdịda ikpeazụ ha mepere ụlọ ahịa mbụ na Mexico ma na-akpọsa nke atọ ugbu a. Oge a ọnọdụ ọhụrụ bụ San Luis Potosí, ebe taa ị nwere ike ịhụ akara ngosi nke apụl bitten na ozi ndị a: "Na-abịa oge adịghị anya"
Ọnọdụ a kapịrị ọnụ ga-abụ thelọ Ọrụ ppingzụ ahịa, El Dorado. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa ịzụ ahịa dị na mpaghara ahụ, nwere usoro ọhụrụ, ọkachasị n'èzí na ebe dị iche iche. Storelọ Ahịa Apple nwere nnukwu ụlọ ahịa echekwara na etiti akụkụ nke ụlọ ahịa. Apple ekwenyebeghị na weebụsaịtị ya oghere nke ụlọ ọrụ ọhụrụ a. O doro anya na ọ na-emikpu ya na ntinye ndị ọrụ maka iwu na dabara na ụlọ ahịa ahụ.
Apple mere mkpebi ụlọ ahịa na-emeghe na Mexico na ọnwa nke June 2016. Na mgbakwunye, naanị otu ọnwa gara aga, anyị mụtara banyere mmeghe nke ụlọ ahịa nke abụọ nke ika na mba ahụ, na Ebe a na-ere ahịa Antara Fashion Hall, ụlọ ahịa a ka na-arụ.
Ọ bụ ebe ọhụrụ, ebe a na-ahụbeghị akara ọ bụla. Ọ bụ n'ihi nke ahụ nha nke otu ihe amaghi ma o siri ike ima udi usoro ulo ahia ga enwe ozugbo ọ dị maka imeghe. Ntinye aka nke Apple na ụlọ ahịa anụ ahụ bụ eziokwu. N'ime ọnwa ndị gara aga, anyị amatala mmasị ụlọ ọrụ na mba South America, dịka Brazil na Argentina. Na mgbakwunye, ọ nwere atụmatụ iji dozigharị ụlọ ahịa Apple, nke nwere ọtụtụ afọ n'azụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nke atọ Apple ụlọ ahịa na Mexico na-erughị afọ abụọ
Ndabere Dynamic na akwụkwọ ahụ aja, ugbu a n'efu maka obere oge